निशा शरद टुक्रियो सम्बन्ध ? निशा अमेरिका उडिन् – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
कान्तिपुर साप्ताहिकमा शरदसँग बिहे गर्ने बताएपनि यस बिषयमा क्रिकेटर भेष्वाकरले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । जसका कारण पनि निशा र शरदको सम्बन्धमा ब्रेकअप लागेको चर्चा चल्नु स्वभाविक नै हो । आशा गरौ, निशाले यस बिषयमा चाडै नै आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्नेछिन् ।
← सुबिन भट्टराइको समर लभमा ‘नाइ नभन्नु ल ५’ बन्ने पक्का
ह्रस्व मात्रै प्रयोग गर्दा नेपालि भाषा बुझ्न सकिन्छ कि सकिदैन? (आनन्दको नेपालि) →
One thought on “निशा शरद टुक्रियो सम्बन्ध ? निशा अमेरिका उडिन्”